IMountain View-Glendalough - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSharon
Kutshanje ukuhonjiswa kwegumbi elikhulu elinomnyango wakho wabucala, obekwe kumda welali yaseLaragh ejikelezwe ziintaba zeWicklow.IZiko leeNdwendwe laseGlendalough kunye nePaki yeSizwe kukuhamba nge-2 km, apho unokujonga amachibi amabini kunye nokuqala kokuhamba okumangalisayo kunye nokuhamba.Ufikelelo olulula kakhulu, njengoko sikwindlela enkulu ukusuka eDublin ukuya eGlendalough kunye nangezithuthi zikawonke-wonke ngebhasi yaseGlendalough kunye nekhonkco lasekhaya elidibanisa nololiwe osuka eDublin/ Wexford.
Igumbi elikhulu elikhanyayo eline-en-suite, ibhedi enkulu yenkosi kunye nesango labucala. Isidlo sakusasa esizisebenzelayo sibonelelwe ngokhetho lwecereal, iyogathi & neziqhamo kunye nokhetho lweti kunye nekofu.Kukho i-mini-friji ebonelelweyo kunye ne-breakfast bar enombono. Emva kosuku olude kwiinduli ungabuya kwaye ujabulele ishawa yombane ngamanzi ashushu azenzekelayo.Ngeengokuhlwa ezinde zasehlotyeni unokuhlala ngaphambili, ujabulele umbono nge-barbeque (amalahle angabonelelwanga).Kukho ne-smart tv kwigumbi ukuze ubukele iNetflix, iAmazon Prime, ngoku iTV, njl.
4.90 · Izimvo eziyi-256
I-Sliabh Amharc ibekwe kumda welali yaseLaragh kunye nokuphosa amatye ukusuka eGlendalough National Park, enesikhululo sepetroli / ivenkile elula, ebandakanya iDeli kunye nelayisensi yewayini.Kukwakho neebha/iindawo zokutyela ezimbini (iLynhams yaseLaragh kunye neWicklow Heather Restaurant) ebonelela ngokutya kwesintu kunye nelizwekazi. Kunye neevenkile ezimbini zekofu (ivenkile yekofu ka-Anne kunye neGlendalough Green).
Ndisoloko ndifumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo iindwendwe ezinokuba nayo